Huawei dia mamaky firaketana: finday maherin'ny 100 tapitrisa namidy tamin'ny 2017 | Androidsis
Mandeha tsara ny raharaha ho an'i Huawei. Ny orinasa sinoa dia nahavita nametraka ny tenany ho iray amin'ireo malaza indrindra eran-tany. Mitambatra ny telefaonin'izy ireo famolavolana, kalitao ary vidiny tena mahaliana. Fampiarahana izay nahatonga azy ireo handresy mpampiasa an-tapitrisany. Ary koa, tato ho ato nanolotra ny findain'izy ireo farany ambony amin'ity fianjerana ity.
Ny drafitry ny orinasa dia be faniriana. Raha ny tena izy, any Espana dia te-hamaha an'i Samsung izy ireo amin'ny maha-mpitarika ny tsena azy ireo. Asa sarotra, saingy ny fitomboana niainan'i Huawei tato anatin'ny taona vitsivitsy dia niavaka. Ankehitriny, manambara ny azy ny orinasa valin'ny varotra ho an'ny telovolana telo voalohany ary izy ireo dia manao izany amin'ny alàlan'ny famakiana rakitra.
Huawei dia nanamafy fa tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2017 namidy telefaona maherin'ny 100 tapitrisa manerantany. Tarehimarika mahavariana izay maneho fitomboana 19% raha oharina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taona lasa. Ka ny zava-drehetra dia manondro ny orinasa sinoa hihoatra ny isa 2016 ny varotra, taona izay namidy singa 140 tapitrisa.
Ny fitomboan'ny varotra dia nisy fiatraikany tamin'ny fidiram-bolan'ny orinasa, manana izany nitombo 30% teo anelanelan'ny volana janoary sy septambra amin'ity taona ity. Ankoatr'izay, ny tetikasan'i Huawei dia be fatratra. Mikatsaka ny hanohy ny fanitarana azy manerantany ny orinasa. Maniry indrindra ny hanitatra amin'ny sehatra afovoany sy avo lenta izy ireo. Na dia ny tena tanjona dia ny handresy ny mpanjifa amin'ny toerana avo.
Mba hahatratrarana ireo tanjona kendrena ireo dia manao zavatra goavambe ny orinasa fampiasam-bola amin'ny fikarohana sy fampandrosoana. Huawei dia manana mihoatra ny Mpiasa 10.000 manatanteraka maneran-tany ireo asa fikarohana sy fampandrosoana ireo.
Ireo vokatra tsara ireo dia nahatonga izany Huawei dia laharana faharoa amin'ny mpanome finday faharoa lehibe indrindra an'izao tontolo izao. Nahatratra an'i Apple izy ireo ary Samsung ihany no mialoha. Noho izany dia hahaliana ny mahita ireo tarehimarika voatantana rehefa tapitra ny taona. Mihevitra ve ianao fa afaka mihoatra an'i Samsung i Huawei?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei dia efa nivarotra telefaona maherin'ny 100 tapitrisa tamin'ny 2017
Ademir dia hoy izy:
Huawei dia manolotra endri-javatra sasany amin'ny finday avo lenta izay tsy ananan'ny orinasa hafa, fa izaho manokana dia nahita lesoka sasany tamin'ny telefaona antonony sy ambany. Na dia izy ireo aza no voalohany nanolotra Android 5.0 tamin'ny finday ambany.
Mamaly an'i Ademir